“BAYAAN” Maanso Cusub oo uu Tiriyey Saleban Cabdi Cali (kalshaale) |
“BAYAAN” Maanso Cusub oo uu Tiriyey Saleban Cabdi Cali (kalshaale)
Marka hore waxaan hambalyo iyo amaan u jeedinayaa Shacbiga Somaliland ee sida milgaha iyo maamuska leh uga qayb-qaatay Doorashadii dalka ka dhacday 13-kii bishan. Waxa kale oo aan bogaadinayaa Murrashaxiinta saddexda Xisbi, bahda Saxaafadda, Laamaha ammaanka iyo qaybaha kale ee hormuudka Bulshada oo iyaguna door wanaagsan ka qaatay howsha Doorashada.
Si gaar ah waxaan u hambalyeynayaa Murrashaxiinta Xisbiyada Mucaaridka oo si biseyl siyaasaddeed ka muuqdo ugu tartamay Doorashada, waxaanan rumaysanahay inaan Doorashada Murrashaxa ku guulaystay madaxtinimadu aanu guulaysan keligii uu Qaranka Somaliland oo dhan guulaystay, haddii natiijaddeeda la ayido oo ay si nabad-gelyo ah inoogu dhamaato Doorashadu.
Haddii cid loo hambalyeynayo guusha Doorashadana, waxaan anigu hambalyeynayaa Murrashaxiinta aan qaddarku u saamixin inay hogaamiyaan dalka oo aan leeyahay dhamaantiin waad guulaysateen.
Intaas markaan ka imaado, Maansada gaaban ee Beyaan waxa ay soo baxday 20/011/2017, waxaanay daarantahay dardaaran iyo darreen ku wajahan xaalada Somaliland ku jirto oo aan doonayo inaan la wadaago Bul-weynta kala duwan ee dalka iyo daafaha caalamka kala joogga.
Maansadu waxay si gaar ah ula hadlaysaa Murrashaxiinta ku tartamay hogaaminta dalka oo ay si guud ugu hoge-tusaalleynayso sida ay wanaagga iyo midnimada umaddu ku jirto ee loo baahan yahay inay ku qaabilaan natiijada Doorashada:
Waxaanay ku bilaabantay Maansadu sidan:
Waa beer ku jecelle
haka bixin axdiga
Nabaddana ha burin.
Bulshadu kuma necbee
Berreey kuu coddeyne
Bello ha u sadqeyn
Burbur ha u horkicin
Ha u bislayn dhurwaa
Inta bahal cidlada
Bugto iyo badraan
Dadkan billicda wacan
Ha u bixin birsade
Badhaadhaha ka tirra.
Kala baddin Ku darra
Inay bahashu tahay
Kuwa laga badshoow
Buuq Utun dhalliyo
Halis Beesha gelin
Ninka tirrada badan
Guusha Baydh Ku helay
Isna yuu isbiddine ee
Ha badsado tallada
Ha bud-dhigo wax maqan
Kii beddeli lahaa
Berri ha u wanqallo
Banka Caydha Wadhan
Yool lagu baanto iyo
Binno ha u yabyabbo.
Inta baylah taal
Dalkan boogta badan
Buugga howgu taallo.
Waxa tiriyey: Saleban Cabdi Cali (kalshaale)